Umgangatho woMgangatho weMveliso
Ngomgangatho we-AASraw, isiqubulo sethu esithi "Izinto zeGenius ziyabonakala" zithetha oko. Ukufumana ii-steroids ezinamava zokupheka okanye abanini beelebhu eziphantsi, ukusuka kwinkangeleko kunye nephunga kunye nabanye oonobumba bomzimba, banokuxela ukuba iimpahla zinobukrelekrele okanye zimbi. Kodwa ukunceda ezandleni ezitsha, Zonke izinto ezivela kwi-AASraw ziqinisekisiwe ngobunyulu kungekho ngaphantsi kwe-98%, uninzi lwempahla lunobunyulu 99%. Kukho iingxelo zokuvavanywa kwe-HPLC kunye ne-COA njengenkxaso esisiseko kwisithembiso sethu. Kwaye, siyabakhuthaza abathengi bethu ukuba bavavanye ipowder eluhlaza ziiLabhoratri zabo zalapha ekhaya kwaye sinokuhlawula iindleko ezinxulumene noko.